दर्दनाक दृश्य जसले सोमबार आम नेपालीलाई भावुक बनायो, दुर्घटनासंग धेरैले हारे ! « News24 : Premium News Channel
दर्दनाक दृश्य जसले सोमबार आम नेपालीलाई भावुक बनायो, दुर्घटनासंग धेरैले हारे !
नेपालले २०४६ साल पछि उदार आकाश नीति अवलम्बन गरेपछि निजी क्षेत्रबाट पनि धेरै विमानहरु नेपाली आकाशमा थपिए । र , घरेलु उडानमा पनि त्यहीं अनुपातमा दुर्घटनाका घटनाहरु बढन पुगे । अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरुको दुर्घटनाको फेहरिस्त पनि नेपाली आकाशमा धेरै नै छन् । चाहे थाई एयरको र पाकिस्तानी इन्टरनेशनल एयरलाइन्सको विभत्स दुर्घटना हुन् । ती सबै आम नेपाली नागरिकको दृश्यमा परेनन् । तर सोमबार युएस बंगलाको विमान दुर्घटना हुँदाको परिदृश्य पृथक रहयो । बिभिन्न टेलिभिजन च्यानलहरुमार्फत दुर्घटनादेखि आगलागी भएको विमान र उद्दार एवं उपचारका दृश्यहरु प्रत्यक्ष हेरे । दुर्घटना जो देख्नु नपरोस र देखाउनु पनि नपरोस । तर समाचार सकारात्मक र राम्रा मात्र कहाँ हुन्छन् र ? यस्तै भइदियो । टेलिभिजन च्यानलहरु अघि थुप्रिएको जमात जो मुटु मिचेर दृश्यहरु हेर्दै भावुक बनिरहेका थिए । विमानमा सवार यात्रुहरुको सकुशलताको कामना गरिरहेका थिए । तर दुर्घटनासंग विमानमा सवार धेरैले हारे , धेरैको परिवारमा रुवावासी मच्चियो । मन आशुँ बनेर पग्लिएर वगिरहयो ।
युएस बंगलाको तर्फबाट घुम्न पुगेका बिभिन्न ट्राभल एजेन्सीका नेपालीहरु दुर्घटनामा परे । बंगलादेशमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन धेरै चिकित्सक बनिसकेका विद्यार्थीहरुले पनि आफुलार्य बचाउन सकेनन् । नेपालको दृश्यावलोकन गरेर पर्यटकीय आनन्द लिन आएका विदेशी पर्यटकहरु दुर्घटनासंगै आफुलाई विलिन बनाए । दुर्घटना जोसंग जित्न असम्भव हुन्छ नै । तर केहीले यस्तै भाग्य बोकेर आएका रहेछन् । जस्ले दुर्घटनालाई जितेर नयाँ जीवनमा प्रवेश गरेका छन् ।